2 Ụzọ undelete ngwa ọdịnala na iPhone
Unu ga-esi ujo ọ bụrụ na mmadụ, ị enyi ma ọ bụ ọbụna onwe gị na mberede ehichapụ ihe ngwa gị iPhone, n'ihi na ọ bụ n'ezie mfe ka ihichapụ ihe ngwa site na iPhone. Luckily, mgbe ọ na-eme, echegbula. I nwere ike iso otu n'ime ndị na-esonụ 2 ụzọ undelete ngwa ọdịnala na iPhone.
Ngwọta 1: undelete ngwa ọdịnala na iPhone site zụrụ List
Ngwọta 2: undelete ngwa ọdịnala na iPhone site Search na App Store
Apple ugbu a mepụtara ha ngwa management dị otú ahụ n'ụzọ na i nwere ike ugbu a mfe reinstall gị ngwa ọzọ ma ọ bụrụ na-eji ngwa e ehichapụ ruru ka ihe ụfọdụ. Ọ na-enyere gị aka weghachi gị ngwa ọdịnaya ma ọ bụrụ na ị nwere Mbido iCloud niile ugboro na ndabere gị iPhone mgbe nile.
N'oge gara aga mgbe iCloud bụghị nnọọ nkịtị, ọ bụrụ na ị accidently ehichapụ ngwa ị na-ma undelete ya site na iTunes ma ọ bụ na-azụ ihe ngwa ọzọ. Ugbu a, ihe dị nnọọ iche ị nwere ike mfe undelete gị ehichapụ ngwa niile ihe dị gị mkpa bụ ime emeghe App Store si gị iPhone ma chọọ ngwa aha ma weghachi ya.
Nzọụkwụ 1 Kpatụ App Store
Enweta App Store si gị iPhone
Nzọụkwụ 2 enweta na 'mmelite' Tab
Ugbu a enweta na 'mmelite' Tab si menu mmanya na ala
Nzọụkwụ 3 Họrọ "zụrụ"
Nzọụkwụ 4 Kpatụ on 'Ọ bụghị na a iPhone' menu
Ugbu a, ị nwere nhọrọ Iji họrọ ihe niile ma ọ bụ bụghị na a iPhone. Ọ bụrụ na ị họrọ "All" ị ga-ndepụta niile dị ngwa gụnyere ndị nke na-ama na arụnyere na ngwaọrụ gị na ọ bụrụ na ị họrọ bụghị na a iPhone, ị ga-ahụ bụ naanị ndị na-eji ngwa nke na-adịghị arụnyere na gị iPhone.
Ugbu a Enweta na 'Ọ dịghị on Nke a iPhone' menu n'elu
Nzọụkwụ 5 Họrọ ngwa
Họrọ ngwa na ị ehichapụ na chọrọ weghachi. Mgbe achọta ị chọrọ ngwa Kpatụ Ígwé ojii na akara ngosi ọ ga-amalite nwụnye usoro.
IHE: Buru n'uche reinstallation nke ngwa bụ free nke na-eri ma ọ bụrụ na i tinyeworị zụrụ na ngwa. Ị nwere ike reinstall zụrụ ngwa ọtụtụ ugboro.
Re-echichi nke ngwa site Search bụ fọrọ nke nta ahụ dị ka zụrụ ndepụta usoro
Na usoro a ị ga-dị nnọọ pịnye aha App nke na-amasị gị iji wụnye ọzọ na Search Igbe nke na App ụlọ ahịa na ị ga-kwekọrọ ekwekọ N'ihi.
Mgbe ịchọta ngwa, taabụ ígwé ojii na akara ngosi ọ ga-nbudata usoro na weghachi ngwa gị iPhone a na mgbe. Nwere ike ịbụ ị ga-enye gị Apple Akaụntụ nkọwa maka Banye usoro.
Ọzọkwa ukwuu n'ime ngwa na-enwe mmasị Games na Games Centers jisiri ha data dị ka ọtụtụ na iCloud nke nwekwara weghachi n'oge reinstallation usoro - ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na anyị pụrụ iche wepụrụ data mgbe ihichapụ ngwa.
Olee otú Hichapụ SMS, Photos, égwu, System Nhọrọ on iPhone
Olee otú Hichapụ ozi ịntanetị site na iPhone
Atụmatụ Iji mee ka gị iPhone Faster (gụnyere iPhone 4 / 4s / 5 / 5s / 6/6 Plus)
Esi iPhone Ringer Nsogbu kapịrị
Otú nyefee Data si Google Nexus ka iPhone
9 na-Dos mgbe na-A New iPhone
Olee otú Naghachi Lost ma ọ bụ ehichapụ iPhone Ndi ana-akpo
> Resource> iPhone> 2 Ụzọ undelete ngwa ọdịnala na iPhone